अब सहकारीहरु मार्फत खाद्यान्नबाली उत्पादनको सुक्ष्म व्यवस्थापन
नेपाली किसानको खेतीपाती हलो गोरु हुँदै तराईमा यान्त्रीकरणसम्म पुगिसकेको छ । पूर्वका तराईक्षेत्र अन्यत्रभन्दा उब्जनी तथा सिँचाईका दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ । यसलाई अहिलेको प्रविधि र पूँजीको व्यवस्था भए दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट खाद्यान्नवाली उत्पादन हुनसक्ने सम्भाव्यतालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपाल कृषि कम्पनीले धान र धानपछिको हिउँदेबालीमा गहुँ र मकैको सफल परीक्षण स्थापित गरिसकेको छ । यस खेतीलाई उतार्न सतप्रतिशत यान्त्रीकरण प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याईसकेको छ । खेती समयमै उतार्न आवश्यक सस्तो र संस्थागत चालूपूँजीको व्यवस्था गरेको छ । यी खाद्यान्नवालीका लागि आवश्यक पर्ने बिउ, मल एवं प्रविधिको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी केही किसानहरुले बिगाहाको ४ टन धान, १०.५ टन मकै र २.६ टन गहुँ उत्पादन गरेका दृष्टान्तहरु पनि छन् । त्यसका बाबजूद यस प्रकारको अधिक्तम उत्पादन सबै किसानले गर्न नसकेको मूख्य कारणहरु औंल्याउँदा कृषि जमिनको खण्डिकरण तथा व्यवसायिक खेतीप्रति पूर्ण लगाव नहुनु नै रहेको छ ।
अघिल्लो पुस्ताबाट ठूल–ठूला खेतीपातीका जग्गाहरु अहिले आएर सरदर प्रति परिवार १ देखि १.५ बिगहा जग्गा मात्रै बाँकी रहेको छ । जबकि यान्त्रीकरणबाट खेती गर्दा जति ठूलो क्षेत्रफल भयो उती थोरै लगानी र अधिक्तम उत्पादन हुने प्रमाणित भइसकेको छ । परम्परागतबाट यान्त्रीकरणतर्फ बामे सर्दै गरेको अवस्थामा यस्ता जमिनबाट व्यवसायिक खेती गर्दा व्यवस्थापन चूस्तदुरुस्त र सरल नहुनु नै हाम्रो थप निष्कर्ष रहेको छ ।
अति खण्डिकृत कृषि जमिनलाई माथि उल्लेखित व्यवस्थामा उतार्न सहकारीहरुमार्फत मात्र सहकार्य गर्न सकिने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । हामीले सम्झना र सामूहिक कृषि सहकारीसँगको सहभागितामा यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छौं । जसले यी सहकारीहरुको व्यवस्थापन व्यवहारिक एवं संस्थागत हुने हाम्रो मान्यता रहेको छ । यस्तो सहकार्यका लागि २०७३ सालको पौषमसान्तसम्म यस विषयमा सम्झौता भइसकेको छ ।
सम्झना र सामूहिक सहकारीको करिब ६५० बिगहामा यसपालीको धान खेती र त्यसपछि हिउँदेवाली (गहुँ, मकै) को सम्पूर्ण व्यवस्थापन सहकारीहरु मार्फत गरिदैछ । यसको अलावा यसैपालि करिब ५० बिगहामा यान्त्रीकृत एस. आर. आइ. (SRI) प्रविधिबाट धान खेती हुँदैछ । यो प्रविधि अपनाउँदा २५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म धान उत्पादन बढ्ने तथ्यांक छ । अहिलेसम्म करिब १५ बिगहामा यस प्रविधिबाट रोपाई भइसकेको छ ।